Apple inodhinda zviziviso zviviri zvitsva zveApple Watch | Ndinobva mac
Apple inoburitsa zviziviso zviviri zvitsva zveApple Watch
Unogona kuona kuti Kisimusi iri kuswedera pedyo uye Apple, sekambani yehunyanzvi, inoda kutora mukana wekutengesa kudhiza unomiririra mazuva aya. Kupfuura vhiki rapfuura vakomana veCupertino vakaparura zviziviso zviviri zvitsva zveApple Watch Series 2 uye Apple Watch Nike +, ese ari maviri mamodheru ane GPS uye kuramba kwemvura. Kwemaawa mashoma, kambani yakatumira mavhidhiyo matsva maviri akanzi Go Surf uye Go Ride, ayo, sekuratidzwa kwezita rayo, inotiratidza iyo Apple Watch Series 2 paunenge uchitsvaira uye mushandisi akatasva bhasikoro.
Mavhidhiyo ese echipiri-echipiri anotanga zvakafanana neakare, nemushandisi achiburitsa wachi achiri kumhanya kunodzidzira mutambo wavanofarira.
1 Apple Yekuona Chinyorwa 2 Go Surf
2 Apple Watch Series 2 Enda Kutasva
Apple Yekuona Chinyorwa 2 Go Surf
Muchiziviso ichi, pamusoro pekuratidzira kusagadzikana kwemvura, Apple inoda kuratidza kuti mudziyo uyu unogadziridzwa sei kutarisa chero mhando yechiitwa chatinoita neApple Watch yedu pachiuno.
Apple Watch Series 2 Enda Kutasva
Iyo Go Ride kushambadzira inotiratidza mukana wekutevera neyechishandiso GPS nzira yatinotora kana isu tichienda kunze nebhasikoro, kunyangwe kana kuri kungotora rwendo neshamwari dzakatenderedza guta. Mazuva apfuura, vakomana vanobva kuCupertino vakatumira mavhidhiyo matsva pane yavo YouTube chiteshi uko kwataigona kuona kuti sei zvakare iyo kambani inotarisa mukusimudzira iyo Apple Watch Series 2 uye iyo Apple Watch Nike +, yakasarudzika edition ine iyo yakafanana Hardware seiyo Series 2 asi ine akasiyana software inoratidza zvese nguva uye zviziviso zvine dhizaini yakagadzwa neApple, mune iro girini girini inoratidzika.
Aya kushambadza ane zita Enda Unotamba, Enda unomhanya uye Enda Unotamba, Vanotiratidza kudya kumwe chete mukati mavo ese, uko mushandisi anokurumidza kuburitsa chishandiso, achiisa paruoko rwavo obuda kunonakidzwa nemutambo wavanofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inoburitsa zviziviso zviviri zvitsva zveApple Watch
Maitiro ekuwedzera mapikicha kuDesktop Mifananidzo mudzi folda
Wedzera zvemitambo zvikoro kuMac Notification Center kubva kuSiri